Fanaovan-dalana atsy La Réunion : lavaka 45 m nakana vato any Toamasina | NewsMada
Fanaovan-dalana atsy La Réunion : lavaka 45 m nakana vato any Toamasina
Lasa resabe ny fanaovana-dalana atsy Le Réunion. Tsy ahitan-teny ny tompon’andraikitra eto Madagasikara, nefa any Toamasina ny nakana ireo vatobe hanaovana ilay lalana. Nopotehina ny ala, nandavahana hatrany amin’ny 45 m.
Nanao fanadihadiana lalim-paka mihitsy ny mpanao gazety atsy La Réunion, avy amin’ny Mediapart, mikasika ny fanaovan-dalana atsy La Réunion, nivoaka ny 9 febroary teo. Asa goavana ity atao ity, ary mahatratra 1,6 miliara euros ny tetibola ampiasaina. Tonga taty Madagasikara izy ireo, satria ao anatin’ny ala Ambokatra, 20 km miala an’i Toamasina, ny toerana itrandrahana ireo vato ilaina amin’ilay fanaovan-dalana. Ahenoana fipoahana dinamita foana ao anaty ala, ahazoana bolongam-bato iray hatramin’ny 10 t.
Vatobe aman-taonina ny mivoaka ao amin’ity ala ity isan-kerinandro trandrahin’ny orinasa vaventy vahiny iray eto Madagasikara.
Fitrandrahana volamena ataon’ny Sinoa
Niteraka resabe any La Réunion ity fanaovan-dalana ity, satria voalazan’ilay gazety fa misy ny fandoavam-bola amin’ny tompon’andraikitra sasany any an-toerana ary niakatra fitsarana ny raharaha ny oktobra 2015.
Etsy ankilany, tsy ahenoam-peo mikasika azy ity ny mpitondra eto amintsika. Toraka izany koa ny fikambanana fiarahamonina sivily miaro ny tontolo iainana, satria any anaty ala voajanahary ny hitrandrahana ireo vato ireo.
Tsy vao izao ny fisian’ny fitrandrahana harena voajanahary tsy mazava eto amintsika. Anisan’ny nanaitra ny sain’ny rehetra ny tompon’andraikitry ny tontolo iainana ao amin’ny faritra Atsinanana, mikasika ny fitrandrahana volamena vaventy ataon’ny Sinoa any Marolambo. Nangataka ny hampiatoana ny fitrandrahana ny faritra saingy manohy ny ataony ihany ilay orinasa sinoa. Fepetra takin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny fanjakana tsara tantana, ka singa manaratsy endrika ny tranga toy ireo.